Izifundo esizifunde ngokuqhamuka kwe-Ebola - i-AfricArXiv
Kushicilelwe ngu UJo havemann on I-22nd March 2020 I-22nd March 2020
U-OB Sisay usinxusa ukuthi sifunde ku Ubhubhane lwegciwane le-Ebola eNtshonalanga Afrika (2013-2016) futhi uthathe izinqumo ezinolwazi mayelana nokuqubuka kwe-COVID-19 ezwenikazi lonke.
U-OB Sisay wayenguMqondisi we-The Situation Igumbi eNational National Ebola Response Center yeSierra Leone ngesikhathi kuqubuka i-Ebola eNtshonalanga Afrika. Wanikezwa indondo yegolide nguMongameli waseSierra Leone futhi wanikezwa i-OBE nguHM The Queen ngeqhaza lakhe ekuqedeni udlame.
Isifinyezo esivela esihlokweni Izifundo ze-COVID-19 ezivela empini yaseNtshonalanga Afrika yokulwa ne-Ebola ngu-OB Sisay (Mashi 2020)
Ishicilelwe ekuqaleni politica.cabanga.bm
Umthombo wesithombe: politica.cabanga.bm
Ukuhlolwa kweqiniso: musa ukuwela imibono yobuqili
Ngesikhathi sezigaba zokuqala zokuqubuka kwe-Ebola, I-WHO kanye nohulumeni bethule izibalo eziphikisanayo mayelana nokutheleleka nokufa - ngakho-ke izakhamizi zazingakholelwa ukuthi i-Ebola ikhona
Esikhundleni sokugcizelela ukuntuleka kwekhambi, gxila emathubeni okusinda ngokuxilongwa kusenesikhathi nokulandela imihlahlandlela nemiyalo yokuphepha
Abanye baya abahlengikazi bendabuko ukudala izindawo zokungena ezintsha njengoba labo belaphi, iziguli zabo kanye nemindeni yabo babegula, bagoduka futhi bayisakaza kabanzi
shayela noma uthumele imiyalezo kumelaphi wakho wendabuko bese ucela ukuqondiswa okukude
Abanye bathatha paracetamol ukukhohlisa amasheke okushisa esikhumulweni sezindiza
abantu abahlali benengqondo lapho becabanga ukuthi bangafa
Izikhungo zezempilo zingaba izikhungo zokutheleleka ngokudabukisayo
Qondisisa futhi usebenzise izindlela zokuvikela ukutheleleka ukuvikela abasebenzi neziguli
Ubhubhane lwegciwane luvame ukuthelela izisebenzi zezokwelapha ekuhlaselweni kwesibili
Izinga lokufa kwezinye izifo lizonyuka
Izidingo zemikhawulo yokuhamba yeningi
Gcina abantu bahlinzekwe ngezinto ezibalulekile (ukudla, izimpahla, ukunakekelwa kwezokwelashwa)
Nquma icala ngecala: gcina abantu bevalelwe ekhaya noma ubayise ezikhungweni zezempilo ukuze ubhekisise izimpawu?
Umthetho wesithupha: uhlale ekhaya isikhathi eside ngangokunokwenzeka / ekhaya ukunciphisa ukuxhumana ne-ppl evaliwe ngenkathi kukhulisa izindlela zokuphepha (ukubulala amagciwane, ibanga lomzimba)
Amakhambi nemijovo kudinga ukwakhiwa ngesikhathi sokugqashuka
Izimpendulo zenqubomgomo yomphakathi nezinye zomphakathi kufanele zibe namandla kakhulu
Sikhokha kanjani impendulo ngaphambi / phakathi / nangemva kokugqashuka?
Emhlabeni jikelele, amazwe acebile kufanele asekele ama-LMICs kubantu kanye namaketanga okuhambisa
Izinkampani kufanele ziphindisele imodeli yazo yonke yokuhlinzekela ukuqinisekisa ukuqina
Izinkampani, izikole, amaphoyisa, amahhovisi omphakathi, amajele njll. Bonke kufanele babuyekeze usizo lokuqala nokuzihlukanisa namandla kanye nokuqeqeshwa
U-OB Sisay wayesenhliziyweni yezimpendulo zaseSierra Leone ekuqubukeni kwe-Ebola kusuka ngo-2014-2016. Lapha usitshela ngokubaluleka kokuthungatha othintana nabo, nokuthi yiziphi izifundo abazifundile ngaleso sikhathi ezingasetshenziswa kubhadane lwamanje lwe-coronavirus, ligqamisa umehluko phakathi kwamagciwane amabili. Ubekhuluma noBola Mosuro. (Isithombe: Owesifazane ukhuluma nesikhulu sezempilo eNingizimu Afrika. Isikweletu: Izithombe ze-Getty) // bbc.co.uk/sounds/play/p088lrb5
Sisize sihlanganise futhi sinikeze izinsiza ezidingeka yi-vieiphiko kanye neqhaza ezintweni ezilandelayo
I-Google Doc: tinyurl.com/COVID19-Africa-Impendulo
Xhumana nathi ukuze ujoyine Impendulo ye-COVID-19 Africa iqembu lamavolontiya: info@africarxiv.org
Ezinye izifundo-ezifundwe ku- #Ebola lomhlaba
? Funda https://t.co/qQyHkSaj3M ?#coronavirusafrica # COVID19 https://t.co/1zYgqFao0r
- I-AfricArXiv (@AfricArxiv) Mashi 19, 2020
Case Study: Ukuqubuka kwegciwane le-Ebola ngo-2014 eNtshonalanga Afrika. Lolu cwaningo lwamacala lususelwa emsebenzini wokuqala owethulwe njenge Iphosta at IMOYA izingqungquthela umhlangano waminyaka yonke we-2019 kanye ElPub 2019.
Categories:	UkubambisanaVula UkufinyelelaEzokuxhumana Kwesayensi